Ubomi Good iNcwadi — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Njengoko uninzi lwenu lusazi, Bendikhe ukusebenza incwadi ukuya kunye icwecwe lam ezintsha, Ubomi Good. Kakuhle le ncwadi iza kukhupha kunye iMoody Publishers on October 1, 2012. Funda banzi ngalo kukhupho cinezela ngezantsi. Uhambe uye ku TheGoodLifeTheBook.com ukuba aziswe xa ikhupha.
Hip Hop ARTIST UHAMBO LEE ukumkhulula INCWADI owodwa UBOMI KAKUHLE ON OKTOBHA 1, 2012 NGENXA iMoody ABAVAKALISI
projekthi ezayo yakha ekukhululweni album yangoku redefines "Ubomi Good" umngeni ukuba akasahlali abantu ekukhanyeni ubuxoki kodwa aqalise uhambo entsha nobuqaqawuli ngokugqithiseleyo.
ANGELES, Calif. (UCanzibe 17, 2012) -Billboard Itshathi-nedama hip hop igcisa Uhambo uLee zilungiselela ngenxa yakhe ukukhululwa incwadi bt, Ubomi Good (iMoody Publishers). Uqhubekeko ukuba icwecwe lakhe zakutshanje leyo ekhululwe ngoAprili 10, 2012 ngokusebenzisa Records Reach, Ubomi Good uya kubetha igcina kuzwelonke ngo-Oktobha 1, 2012.
"Kangangeminyaka, Bendikhe ukwenza umculo umngeni iimbono zethu ehlabathini amanqaku kuKristu – kodwa bekusoloko kukho umda umculo, ngokuba kukho kuphela kangaka uyakwazi ukunxibelelana ingoma,"Utsho Uhambo. "Le album wanika abaphulaphuli ezikhawulezayo ubomi elungileyo, kwaye ncwadi iza kuba ngaphezulu ifana nencwadi ngendlela aphile ngayo. Mna ndithandaza ukuba le ncwadi iya kukunceda umfundi ukuba babuye umva ngobuxoki kwaye uphile ngendlela sadalwa ukuze baphile. "
Ngokusebenzisa ubungqina ubomi bakhe, Uhambo uphonononga ubuxoki enizityelweyo, kwaye ayithethi entsha, umfanekiso yebhayibhile ubomi elungileyo. Ukujongisisa zonke zobomi kuquka ulonwabo, impumelelo, neyokuziphatha ngenxa yenyaniso kaThixo The Good ubomi redefines elithi njengoko bengaphili ukukholisa ngokwakho kodwa siphila ngokuba nokholo kuThixo kulungile.
"Ubomi olungileyo benyuka baya encotsheni kwizikhundla eziphezulu, ubomi olungileyo ubomi nayiphi na imbopheleleko,"Utsho Uhambo. "Ubomi ezilungileyo uphila sync noThixo nolugubungela zonke ukuba kufuneka anikele ngalo ngoKristu."
Akukho elifikayo umculo lomboniso lamaKristu, Uhambo ngayo bt, Ukuba Bebesazi, betha kwiivenkile iintsuku kuzwelonke ezimbalwa emva kokuphumelela kwakhe kwisikolo samabanga aphakamileyo. Kwangaloo nyaka, ke naye nom iHobe on Award-otyunjwe, classic asiphelelwa "UYesu image" neqabane ileyibhile Lecrae. Uhambo ngayo sophomore album,20/20, yakhululwa 2008 kwaye uzenzele nempumelelo enkulu: ukuqhekeza Billboard Top 200, ekufikeleleni #11 kwi Billboard zamaKristu albums itshathi Sathi #4 kwitshati yeVangeli. Nge icwecwe lakhe studio lwesithathu, Phakathi Ababephila, Uhambo wanikela ingqokelela izibhengezo ngobomi kwihlabathi bewile. Abo nokuvakalisa achukumisa abaphulaphuli njengoko B2W debuted ngelo #1 kwi komKristu yeVangeli Billboard iitshathi, #5 phezu Hop / itshathi Rap iTunes kunye #9 phezu Albums Top itshathi iTunes. Yelicwecwe wafumana amabini abatyunjiweyo nehobe Award Stellar for Best yeVangeli Rap / Hip Hop Album woNyaka.
Uhambo-WCED ukukhululwa album, Ubomi Good debuted ku #2 zombini phezu Hop iTunes iitshathi ngokubanzi kunye Hip ngelixa garnering le #3 indawo kwitshati Hip Hop Billboard ngayo, kweenqwelomoya #17 kwi Phezulu 200 itshathi Billboard kwaye ndiwathatha #1 into kwi itshathi abangamaKristu yeVangeli Billboard.
Uhambo ihambe ihlabathi kakuhle yamawaka abaphulaphuli. Ngokudibene ne Ubomi Good, Uhambo okwangoku kuhambo zokwazisa lonke yaye kuya kuba anokuhanjiswa igcisa kwiindawo ezahlukeneyo 2012 imithendeleko kuquka uMoya West Coast, Atlanta Fest kunye Rock The Lakes, phakathi kwabanye.
Malunga iMoody Publishers
Kuba ngaphezu 115 kwiminyaka, Moody Publishers lipapashe athembeke, izinto substantive igqalise miba ibalulekileyo ebomini. Baqhubekeka ukuhlangabezana neemfuno emarike ekhulayo iyatshintsha iimveliso mgangatho uphezulu, incwadi ngokwemveli eprintiweyo, ngokusebenzisa erekhodiweyo neevidiyo iimveliso, yaye ngoku nge-e-iincwadi readers khetha electronic. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, nceda undwendwele http://www.moodypublishers.com/.
Malunga Reach Amarekhodi ReachLife Ministries
Ukufikelela Records kwaye ReachLife Ministries bazama, "Ukuvala umsantsa phakathi inyaniso yeBhayibhile kunye nomxholo ezidolophini." Eyasekwa ngo 2003, Reach yeeRekhodi ilayibhuli irekhodi umculo umKristu azahlulele usebenzisa umculo njengendlela yokufikelela kuluntu ezidolophini ngendlela lweBhayibhile isandi. Nangona Reach Records iqeshe umculo ukutyhila inyaniso yeBhayibhile, ReachLife Ministries ijolise ekuxhobiseni iinkokheli ubulungiseleli nale umculo ukuze akhule ibandla ezidolophini.
Ukufumana ingcaciso engaphezulu kunye noluhlu ngeziganeko ezizayo Reach Amarekhodi ReachLife Ministries, nceda undwendwele http://reachrecords.com. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi malunga ReachLife nceda undwendwele http://reachlife.org/.
Sabahspsalm777 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:51 mna • impendulo
Uxolo umzalwana intsapho yethu yonke uyayixabisa artistry yakho nendlela iNkosi usebenzisa kuwe. Akukho mthetho kodwa ezinye ekuhlaleni amakholwa ndikuvile amarhe ukuba i si “mason” kunye naloo illuminati. Andizami ukusasaza kelwa, nje singakuvuyela, ukuba uyakwazi ukuqwalasela lo. Kuloo ndawo thina ebomini kukho ukukrexeza ngokomoya kangaka okwenzekayo yaye amaKristu bobuxoki balahlekise abantu, ngaba nceda wenze ingxelo ukuze abantu bazi kwenzekantoni. Amanye amaqabane akho ileyibhile babonakala ebengezelayo imiqondiso masonic esezirekhodiwe kukho. Ndafika iNkosi, emveni iminyaka yobugqi kwaye uyazi ukuba kuninzi oko ebandleni lolukaSathana. i ningaqondi ukuba kuwe, kodwa kufuneka sonke ukuba sibe simahla inkohliso. Nceda thatha akukho mthetho oku uzayo ukusuka kwindawo uthando nenkxalabo.
Michael Office • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:52 mna • impendulo
Kuhle! Kufuneka ukuba niphume iMoody Institute Bible – Spokane ngenxa ikonsathi ukukhululwa! :)